Ikuku chaja Duo, ọ ga-abụ chaja okpukpu abụọ maka ihe ngosi 9 na Galaxy Watch | Akụkọ akụrụngwa
Ikuku chaja Duo, ọ ga-abụ okpukpu abụọ Qi chaja maka Nkọwa 9 na Galaxy Watch
Ihe ngosi nke ohuru Samsung Galaxy Note 9 di ezigbo nso na ntaneti ohuru na ngosi a adighi ezo aka na ngwa nke ya nke anyi nwere ike ikwu ugbua na ihe niile mara, na nke a ihe anyi huru bu ngwa ohuru nke ga bido oru n’oge ihe a na ihe A ga-eji ya na -ebi phablet na Galaxy Watch ọhụrụ, Ikuku chaja Duo.
Ekwuru na ọ dị a Qi base yiri nke Apple Mana ka anyi nwe olile anya na odighi eme dika Apple, nke webatara ya ihe dika otu afo gara aga, ma o ghaghi ibuputa ya n’ahịa. Hapụ asọmpi ahụ n'akụkụ, anyị nwere ike ịsị na isi ikuku ọhụụ ọhụrụ a maka Galaxy Note 9 na ọhụụ ọhụụ nke Galaxy Watch (Galaxy Gear 4).
Nkwupụta ndị ahụ dọrọ aka na ntị na ntọala a ga-enwe ike ịgba ụgwọ ngwaọrụ abụọ n'otu oge ma ghara ịkọwa n'oge ọ bụla na ọ bụ ntọala maka nche na maka Nkọwa 9, mana o doro anya na ọ ga-arụ ọrụ. Leak ahụ na-abịa n'ụdị ihe oyiyi na otu tweet si Roland Quant, nke ọ na-egosi anyị ihe ntọala a nwere ike ịbụ na Samsung ga-eweta na August 9:
Nke a bụ Samsung Ikuku chaja Duo (EP-N6100) maka Galaxy Cheta 9. Charges Galaxy Watch n'akụkụ ekwentị. pic.twitter.com/VnP10xAhvb
- Roland Quandt (@rquandt) 21 2018 XNUMX
Obi abụọ adịghị ya na aha ntọala ahụ egosiworị ebumnuche doro anya nke ụlọ ọrụ ahụ iji nwee ike ịgba ụgwọ elekere na Nkọwa 9 dị na ya, mana ọ nwekwara ike ịgba ngwaọrụ abụọ n'otu oge na ụdị teknụzụ ikuku na-akwụ ụgwọ. Ọ dịghị ọtụtụ ihe fọdụrụ maka ngosi a ga-ewere ọnọdụ na ya ka anyị ga-ahụ ihe ngosi ohuru 9, ihe ohuru nke Bixby 2.0, smartwatch ohuru na uzo abuo yana aha ọhụrụ Galaxy Watch na ndị ọzọ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Ikuku chaja Duo, ọ ga-abụ okpukpu abụọ Qi chaja maka Nkọwa 9 na Galaxy Watch
Anyị na-enyocha igwefoto Insta360 Nano S, igwefoto 360º nwere ike iso gị n'oge ọ bụla